DigitalNote စျေး - အွန်လိုင်း XDN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DigitalNote (XDN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DigitalNote (XDN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DigitalNote ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 016 716.00
volume_24h_usd: $5 391 420.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DigitalNote တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DigitalNote များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DigitalNote XDN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00128DigitalNote XDN သို့ ယူရိုEUR€0.00109DigitalNote XDN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000982DigitalNote XDN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00117DigitalNote XDN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0116DigitalNote XDN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0081DigitalNote XDN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0286DigitalNote XDN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0048DigitalNote XDN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00172DigitalNote XDN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00179DigitalNote XDN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0287DigitalNote XDN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00993DigitalNote XDN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00697DigitalNote XDN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0961DigitalNote XDN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.216DigitalNote XDN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00176DigitalNote XDN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00194DigitalNote XDN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.04DigitalNote XDN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00893DigitalNote XDN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.136DigitalNote XDN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.52DigitalNote XDN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.496DigitalNote XDN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0945DigitalNote XDN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0355
DigitalNote XDN သို့ BitcoinBTC0.0000001 DigitalNote XDN သို့ EthereumETH0.000003 DigitalNote XDN သို့ LitecoinLTC0.00002 DigitalNote XDN သို့ DigitalCashDASH0.00001 DigitalNote XDN သို့ MoneroXMR0.00001 DigitalNote XDN သို့ NxtNXT0.0902 DigitalNote XDN သို့ Ethereum ClassicETC0.000185 DigitalNote XDN သို့ DogecoinDOGE0.379 DigitalNote XDN သို့ ZCashZEC0.00001 DigitalNote XDN သို့ BitsharesBTS0.0493 DigitalNote XDN သို့ DigiByteDGB0.044 DigitalNote XDN သို့ RippleXRP0.00437 DigitalNote XDN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 DigitalNote XDN သို့ PeerCoinPPC0.00433 DigitalNote XDN သို့ CraigsCoinCRAIG0.579 DigitalNote XDN သို့ BitstakeXBS0.0542 DigitalNote XDN သို့ PayCoinXPY0.0222 DigitalNote XDN သို့ ProsperCoinPRC0.159 DigitalNote XDN သို့ YbCoinYBC0.0000007 DigitalNote XDN သို့ DarkKushDANK0.407 DigitalNote XDN သို့ GiveCoinGIVE2.75 DigitalNote XDN သို့ KoboCoinKOBO0.285 DigitalNote XDN သို့ DarkTokenDT0.00118 DigitalNote XDN သို့ CETUS CoinCETI3.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 06:00:02 +0000.